2021 - Page 2 of 3 - Benadir University
Maanta oo Talaada Taariikhduna ku beegantahay 14-9-2021 waxaa Hoolka kambaska Prof. Ibrahim Addow lagu qabtay workshoop.
September 14, 2021ByBUUniversity News
Maanta oo Talaada Taariikhduna ku beegantahay 14-9-2021 waxaa Hoolka Shirarka kambaska Prof. Ibrahim Addow lagu qabtay aqoon kororsi ciwaankiisu ahaa (Hogaaminta Hay’adeed iyo Hormarinta awooda xirfadeed) waxaana kasoo qeyb galay Maamulka sare ee Jaamacadda Benadir. Workshoopka ayaa waxaa soo jeedinaayay Dr. Abdullahi Mohamed Elmi.
Ardayda ugu sareysa Kulliyadda Shareecada iyo Qaanunka ee Semester-ka 2aad ee 2020 – 2021
Maamulka Kulliyadda Shareecada iyo Qaanunka ee Jaamacadda Benadir (faculty of sharia &law) waxa uu uhambalyeynayaa Ardayda ka gashay kaalimaha Kuliyadda sanadka 2020-2021, Ardaydaas oo kaalimaha ukala gashay sida tan:
Difaacashada buugga qalin jibinta Kulliyadda Xannaanada xoolaha.
September 9, 2021ByBUUniversity News
Dufcada 8aad ee Kulliyadda Xannaanada xoolaha ayaa maanta difaacday Buuga Qalinjabinta. Difaacashada buugga ayaa waxey kadhacday hoolka weyn ee kambaska Prof. Ibrahim Addow sido kale waxaa kasoo qeyb galeen Maamulka Jaamacadda iyo Maamulka kulliyadda xanaanada xoolaha.
Difaacashada buugga qalin jibinta Kulliyadda Shareecada iyo Qaanunka.
September 2, 2021ByBUUniversity News
Maanta oo Khamiis ah Taariikhduna ku beegantahay 02/09/2021 waxaa hoolka Prof. Ibrahim Addow ee Jaamacadda Benaadir ku difaacday buugaagta qalinjebinta dufcada 8aad ee Kulliyadda Shareecada iyo Qaanunka, waxaana daah furay barnamijka hormuudka Kulliyadda ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee Jaamacadda Benadir, sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay madaxda iyo macalimiinta Kuliyadda Shareecada iyo...
Sagootinta ardayda dufcadda 5aad ee qeybta Procurement & logistics.
Ardayda Dufcada 5aad ee Kulliyadda Maamulka iyo Dhaqaalaha qeebta Procurement & logistics ayaa Xaflad Sagootin ah usameyeen Maamulka iyo Maclimiinta Kulliyadda. Halkaas oo ay ku gudoonsiyeen Shahaado Sharaf Maamulka Kulliyadda iyo Maclimiinta. Maamulka iyo Maclimiinta ayaa dardaaran iyo Dhiira gilin usoo jeediyay ardayda Sanadkaan ka qalin jibisay Kulliyadda Maamulka iyo Dhaqaalaha qeebta Procurement & logistics.
Ardayda ugu sareysa Kulliyadda Culuumta Kombuyuterka iyo Teknolojiyada ee Semester-ka 2aad ee 2020 – 2021
Maamulka Kulliyadda Culuumta Kombuyuterka iyo Teknolojiyada waxey soo bandhigayaan ardayda Dufcooyinka 16aad, 17aad iyo 18aad ee kaalimaha hore ka galay Semester-ka 2aad ee 2020 – 2021 iyaga oo ugu tahniyadeynaya juhdiga iyo dadaalka dheeriga ah ay ku bixiyeen mudadii waxbarashada ay ku jireen waxaana leenahay waxaa tahin arday ku dayasho mudan. Sidoo kale Maamulka waxey...
Difaacashada buugga qalin jibinta Kulliyadda Culuumta Dhulka iyo Bey’ada.
September 1, 2021ByBUUniversity News
Difaacashada buuga qalin jibinta dufcada 3aad ee Kulliyadda Culuumta Dhulka iyo Bey’ada ayaa maanta lagu qabtay hoolka Prof. Addow. Sido kale waxaa kasoo qeyb galay Maamulka Kulliyadda, Maclimiinta Kulliyadda iyo Waalidiin.
Daah Furka Ballaarinta Maktabadda Jaamacadda.
August 30, 2021ByBUUniversity News
Waxaa Maanta oo Isniin ah Taariikhduna ku beegantahay 30-8-2021 dib loo furay Maktabadda Dr. Kulmiye ee ku yaala Kambaska Dr. Shahiid ee Jaamacadda Benadir. Maktabadaas oo ballaarin lagu sameeyay ayaa furitaabkeeda waxaa Xarigga kajaray Gudoomiyaha Jaamacadda Benadir Dr. Moahmed Mohamud Hassan (Dr. Bidey) iyagoo ay goob joog ka ahaayeen Xubnaha Golaha Tacliinta.
Difaacashada buugga qalin jibinta Kulliyadda Culuumta kombuyutarka.
August 26, 2021ByBUUniversity News
Difaacashada buuga qalin jibinta dufcada 15 aad ee Kulliyadda Culuumta Kombuyutarka iyo xogta Teknolojiyada ayaa maanta lagu qabtay hoolka Prof. Addow. Sido kale waxaa kasoo qeyb galay Maamulka Kulliyadda, Maclimiinta iyo waalidiinta. Ardayda ayaa soo bandhigay mashaariic baahi badan ay uqabto bulshada Soomaaliyeed ayaga oo siqurux badan ku difaacday mashaariicdooda iyo buugga qalin jibinta. ...
DAAH FURKA IYO XARIG JARKA KULLIYAD CUSUB
August 25, 2021ByBUUniversity News
Gudoomiyaha Jaamacadda Benadir ayaa ka qeyb galay xafladda lagu daah furaayo Kulliyadda cusub ee Culuumta Badda iyo Kheyraadka, ayada oo ey kasoo qeyb galeen dhamman golaha tacliinta sare ee Jaamacadda Benadir iyo madax ka socotay Mu’asasada Jaamacadda Benadir.